Xavi Oo Layaab Ku Tilmaamay Lunsiga Cashuurta Ee loo haysto Cristiano Ronaldo
HomeWararka MaantaXavi Oo Layaab Ku Tilmaamay Lunsiga Cashuurta Ee loo haysto Cristiano Ronaldo
05/12/2016 Abdiwahab Ahmed
Kabtankii hore ee Barcelona, Xavi Hernandez ayaa ka hadlay wararka naxdinta leh ee maalmihii u dambeeyey laysla dhex marayey, kuwaas oo sheegaya in laacibka Real Madrid ee Cristiano Ronaldo uu la baxsaday lacago badan oo cashuur ah.
Warbaahinta Spain ayaa toddobaadkii hore soo bandhigay warar sheegaya in Ronaldo aanu bixinin cashuurtii ku waajibtay lacago badan oo soo galay, kuwaas oo intooda badan ay uga yimaaddeen heshiisyo xayeysiis. Warkan oo ay baahisay warbaahinta El Mundo ayaa waxa uu sheegay in booliska iyo saraakiisha cashuuruhu ay baadhitaano ku hayaan xiddigga reer Portugal.
Haddaba Xavi Hernandez oo u warramay RAC1, ayaa waxa uu sheegay in uu layaabay warkan laga sheegayo Ronaldo iyo xaddiga lacagta lala xidhiidhinayo in uu la baxsaday.
“Waan la yaabanahay waxa ku dhacaya Ronaldo, sababtoo ah xaddiga lacagta la leeyahay wuu la baxsaday. Ma garanayo duruufaha jira iyo ku lug lahaanshaha ama in la-taliyeyaashiisu ay ka masuul yihiin. Anigu mar walba waxaan isku dayaa inaan iska ilaaliyo sharciga lacagaha.” Sidaas ayuu yidhi Xavi oo u muuqday inuu eedaymo u jeedinayo Ronaldo.
“Isbeddel ayaa laga yaabaa in lagu sameeyo sharciga, sababtoo ah waxa jira dhibaatooyin, laakiin anigu waligay maan samaysan shirkad been-abuur ah ama wax la mid ah oo aan cashuuraha kula baxsado.” Sidaas ayuu mar kale yidhi.
Geggida Macmalka Ah (Roogu ku goglan yahay) Codeyn Loo Qaaday Oo Mar Kale Guuldaraysatay
Mijatovic: “Juventus Way Ku Farxi Doontaa Natiijo Ah 0-0”